Sida loo naqshadeeyo astaanta hal-abuurka: Tallaabo tallaabo loo sameeyo astaanta hal-abuurka ah | Hal-abuurka Online
Sida loo naqshadeeyo calaamadaha hal-abuurka leh
Noocyada, oo ay la socdaan naqshadeynta astaanta, ayaa hadda ah kuwa ugu muuqda oo lagu aqoonsan karo warshadaha ee naqshad sawireed. Si kastaba ha ahaatee, marar badan waxaan iloobin tillaabooyinka u dhigma, si aan u naqshadeyno calaamad shaqeynaya, isla mar ahaantaana, taas oo ah hal-abuur iyo shakhsi.
Waxaan xasuusannahay aasaaska: midabada ama khadadka, xarfaha, walxaha garaafyada, garaafyada, textures, curiyeyaasha joometeriga, iwm. Laakin ma xisaabtano dhinacyo kale oo anfaca nagu yeelan kara, marka la abuurayo sawir-gacmeedyada ugu horreeya ama is burinaya.
Qoraalkan, waxaan ku tusi doonaa qaar talooyin ama talooyin taasi waxay kaa caawin doontaa inaad abuurto calaamado soo jiidasho leh.
1 Astaanta sida astaanta
2.2 Samee cilmi baaris badan
2.5 Abuur isbeddello cusub
2.8 Digitization iyo farshaxanka ugu dambeeya
Astaanta sida astaanta
Xigasho: Web Design
Astaanta waxaa lagu qeexaa inay tahay calaamad aqoonsiga. Taas ayay dadweynuhu ku aqoonsan doonaan alaabtaada iyo/ama adeeggaaga iyagoo ku dhex jira kuwa kale oo badan. Waxa yar ayaa og in, ka dib abuurista calaamadda, waxaa jira shaqo ballaadhan baaritaan.
Taasi waa, qayb ka mid ah horumarinta male-awaalka aragtida halka waxa aan u naqaanno naqshadeynta iyo cilmi-nafsiga, ku lug leh semiotics, midabka, halabuurka, fikradda, iwm. Tani, waxay qaadataa naqshadeeye waqti dheer si uu u yimaado calaamadda ugu habboon, maaddaama muhiimad badan la siinayo xaqiiqda ah in ay qurux badan tahay oo shaqeyneyso, baahida gaarka ah ee macmiilka.
Marka xigta, waxaanu kaa caawin doonaa inaad hubiso in samaynta calaamad gaar ah ayan wax dhibaato ah kuu keenin. Intaa waxaa dheer, haddii kharashka shaqada uu codsado macmiilku ka badan yahay miisaaniyaddaada, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la farageliyo sida ugu dhakhsaha badan, iyo haddii loo baahdo, ku soo celi bilawga ugu horreeya ee habka naqshadeynta. Mararka qaarkood waxaan shaqaaleysiinaa naqshadeeye mana hayno wax fikrad ah sida calaamad loo fikiro, ogaanshaha tallaabooyinkaas waxay kaa caawin karaan inaad si cad u qeexdo oo aad si fiican u waafajiso fikradahaaga sida kuwa xirfadlayaasha ah, adigoo helaya natiijo aad u wanaagsan.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto in aysan jirin wax sixir ah si loo abuuro calaamad. Naqshadeeye kastaa wuxuu leeyahay hab u gaar ah.
Xigasho: PC world
Ugu horreyntii, waa in aan fahamnaa in calaamaddu ay tahay mid fudud. Waxaan fahamsanahay sida fudud, naqshadeynta aan u baahnayn in la sheego waxa ay rabto in la yiraahdo, laakiin kaliya ayaa u sheegaysa. Mar haddii calaamaddu ay tahay mid ka tarjumaysa garaafyada shirkaddaada oo ay tahay in loo habeeyo si fudud la tilmaamay, iyada oo aan lahayn xog aan loo baahnayn.
Kaba soo qaad in aanu haysano liis ay ku qoran yihiin calaamado aad u tifaftiran, kuwaas oo ay ku raran yihiin xubno iyo saamayn, waxa macquul ah waa in ay gudbiyaan dareen habacsanaan. Si aad si fiican u fahamto, calaamaddu waa marka aan ku biirno astaanta siinaya wejiga astaantaada, cinwaanka / magaca.
Taasi waa, taas macnaheedu waa in calaamaddaada ay tahay "naqshad" badhkeed iyo badhkeed. Iyo mararka qaarkood, marka lagu daro magacaaga sumadda, qoraal qaar ka mid ah taageero ama halhays ayaa lagu daray. Sidan xaalku yahay, fudaydkaas waa in sidoo kale lagu ilaaliyaa farta qoyska ee qoraalkaas lagu qorayo. U fiirso in "ilo" lagu soo xigtay si kali ah. Isticmaalka wax ka badan hal far oo sumadda laguma talinayo. Qoraal isku mid ah oo summadaada ku yaal ayaa soo saara muuqaal muuqaal ah, arrimuhuna si fiican ayey isugu daraan oo waxaad ku xardhan tahay xusuusta muuqaalka macmiilkaaga, magaca astaantaada fartaas gaarka ah.
Samee cilmi baaris badan
Qayb aad muhiim u ah abuurista calaamad wanaagsan ayaa ah cilmi baaris sida tallaabada ugu horreysa. Tani maahan sida ay wax yihiin, laakiin in la haysto tixraacyo wanaagsan ayaa lagama maarmaan u ah abuurista calaamad xiiso leh.
Samaynta weji cilmi baaris oo wanaagsan, waxay horseedaa falanqayn sax ah iyo abuurista tallaabooyinka ka dambeeya. Yacni, haddii aan ku bilowno naqshadaynta shay aynaan si dhab ah u garanayn waxa uu yahay, natiijadu waxay la mid noqonaysaa inaynaan waxba samayn. Taasi waa sababta naqshadeeyayaasha ay ku adkaystaan ​​baaritaanka, on la diiwaangeliyo.
Marka hore, ka fikir calaamadaha aad ugu jeceshahay. Calaamadahaas aad eegto oo aad si sax ah u garanayso waxay ku saabsan yihiin. Tusaalooyinka sida Nike, Coca-Cola iyo Apple ayaa had iyo jeer la soo xigtay sababtoo ah waa wax aan muran lahayn in calaamadahani ay yihiin hoggaamiyeyaasha suuqa qaybahooda si fududna loo aqoonsan karo calaamadahooda.
Rumayso ama ha rumaysan, waxaa jira shirkado sameeya wax soo saar la mid ah adiga ama laga yaabo inay u sameeyaan si la mid ah oo ku dhow waxaad rabto inaad iibiso. Marka tani dhacdo, waxaa muhiim ah inaad falanqeyso tartankaaga.
Falanqaynta tartankaaga macnaheedu maaha in aad koobiyayso waxa ay iibiyaan iyo sida ay u iibiyaan. Laakin ogow kaaga habka oo ka feker sida aan awoodno wanaajin si shirkadeenu isu dhigto meesha ugu sareysa suuqa.
Istaraatiijiyada suuqgeyntu waxay u ekaan kartaa inaad taqaan, si fiican, tani waa meesha suuqgeyntu iyo xeeladaheeda kala duwani ay ka ciyaaraan. Waxaan ku siineynaa tusaalahan soo socda si aad si fiican u fahamto: Bal qiyaas in aad sameysid calaamad shirkad iibisa kabaha kabaha. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno baaritaanka ka dib waa inaan falanqeyno tartamada suurtagalka ah. Si taas loo sameeyo, waxaan samayn doonaa raadinta gudaha iyo dibadda karti, sida Nike Nike Waxay noqon kartaa tartan gudaha ah oo wanaagsan tan iyo markii ay soo saarto kabaha kabaha iyo qaabka ay u iibinayaan ayaa laga yaabaa inay ku dhow yihiin waxa aad iibinayso iyo sida aad u iibinayso.
Hagaag, haddii aan hore u soo sheegnay tartanka, hadda waxaan sharxeynaa qodobka soo socda. Bartilmaameedku maaha wax ka badan waxa aan ku naqaano suuq-geynta sida bartilmaameedka bartilmaameedka. The bartilmaameedka dadweynaha, si aad si fiican u fahamto, dhagaystayaasha aan wax ka qaban doono waa la qeexay. Taasi waa in la yiraahdo, haddii Nike ay iibiso kabaha kabaha, waxa ugu macquulsan ayaa ah in lagu hago ciyaartoyda ee maaha kalkaalisooyinka ama cunto karisyada. Laakiin tani halkan kuma dhammaanayso, maadaama bartilmaameedku ka mid yahay da'da, dhadhanka iyo hiwaayadaha iyo heerka dhaqan-bulsheed ee ay leeyihiin.
Taasi waa sababta, ka hor inta aanad abuurin calaamad, waxaad u baahan tahay inaad ogaato cidda shirkaddaadu ay wax ka qabanayso.
Abuur isbeddello cusub
Ka dib markaad ogaato waxa tartankaagu qabanayo iyo falanqaynta bartilmaameedka, waa inaad cusbooneysiisaa naftaada oo aad raadisaa wax kasta oo dhacaya ee la xiriira naqshadeynta. Naqshadayntu waa shay si joogto ah isu beddelaya. Wixii la qabtay 90-meeyadii ayaa gabi ahaanba ka duwan wixii la sameeyay 2000-meeyadii, taas oo sidoo kale ka duwan tan maanta la sameeyo. Taasi waa sababta, marka aan ka hadalno naqshadeynta, waxaan ka hadalnaa taxane ah dhacdooyinka kuwaas oo la daah-furay muddo ka dib iyo in kuwii hore loo beddelo wax cusub si ay kan cusubi u noqdaan kuwo duugoobay oo u keena naqshad cusub iyo wixii la mid ah si joogto ah.
Raadinta summada maanta la sameeyay oo tixraac ahaan loo qaato, waxay ka hortagtaa abuurista wax duugoobay ama ka baxsan qaababka hadda. Waxaa laga yaabaa inay u muuqato fikrad wanaagsan inaad sameyso wax ka baxsan sanduuqa si aad si sahal ah u soo baxdo, laakiin habkaas ayaa calaamaddaada lagu xiriirin karaa shay aad u duugoobay ama dhadhan xun, iyada oo aan lahayn aqoonsi muuqaal ah oo qumman, kaas oo caajis ah. Sidoo kale in la xasuusto in ay adag tahay in ay jiraan "A isbeddel" hadda. Dabeecadaha way wada nool yihiin, way isku dhafan yihiin, way kala qaybsan yihiin.
Marka aan horay u baarnay wax kasta oo aan u baahanahay, waxaa lagama maarmaan ah in aan u gudubno fikradda. Habkani ma aha wax ka badan ururinta fikradaha, taas oo ah, erayada taas oo soo koobaysa wax kasta oo aan rabno in aan mashruuc ka samayno naqshadeena iyo shirkadeena. Caadi ahaan, liis ayaa laga sameeyay fikradahaas labadaba la taaban karo sida aan la taaban karin.
Maxay tahay sababta qodobkani muhiim u yahay?Hagaag, sababtoo ah waa kan tallaabadii hore habka sawir-gacmeedka. Taasi waa, marka aan haysano dhammaan fikradahan qaabka ereyada, waxay noqon doontaa waqtigii la bilaabi lahaa in loo beddelo sawirada ugu horreeya, sawir-gacmeedyo yaryar oo muujinaya gacanta koowaad waxa aan rabno inaan sheegno.
Marka xigta, waxaanu sharaxnaa tillaabada xigta ee aan kaaga sheegnay: wejiga sawir-gacmeedka.
Sawir-gacmeedka waxaa lagu qeexaa sida sawirada hore, ama xagashada si aad si fiican u fahanto. Garaafyadaan waxaa lagu sifeyn doonaa waqtiga iyo habka. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka bilaabi doonaa fikradda koowaad oo wax ka sheegi doonta mashruuceena, waana hagaajin doonaa si dhamaadka, uu u sheego wax walba.
Sawir-gacmeedyada waa la tirtiri karaa ama la dooran karaa, iyadoo ku xiran shaqada aan rabno inaan siino naqshadeena. Taasi waa sababta wejiga sawir-gacmeedku u yahay mid ka mid ah wejiyada na siiya caawinta si aan u gaarno natiijada ugu dambeysa ee aan rabno inaan helno.
Digitization iyo farshaxanka ugu dambeeya
Marka aan helno naqshad la doortay oo la safeeyey, waa la digitized. Waa inaan xisaabta ku darnaa barnaamijka aan ku shaqeyn doono iyo sida aan ugu shaqeyneyno marka aan u wareejinno PC-ga. Sidaa darteed, aad bay muhiim u tahay in daraasad hore lagu sameeyo sida aan u doonayno khadadka, qoraal-qoraalka, khadadka chromatic ama palette midabka iwm.
Marka la digitized, wax ka beddelka ugu dambeeya waa la dhammeeyaa naqshadaynta iyo dib u hagaajinta iyo farshaxanka ugu dambeeya.
Marka aan ka hadalno naqshadeynta hal-abuurka, waxaan tixraacnaa habraacyo habraacyo ah oo ay tahay inaan gaarno si naqshadeynta, marka lagu daro hal-abuurnimada iyo shakhsi ahaaneed, sidoo kale waa shaqeynaya. Naqshad hal abuur leh oo aan shaqaynayn calaamad waa wax aan faa'iido lahayn.
Hadda waa waqtigii la bilaabi lahaa naqshadeynta oo raac tallaabooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo naqshadeeyo calaamadaha hal-abuurka leh
Barnaamijyada naqshadaynta sawirada
Sida loo beddelo filtarrada Tik Tok